Garaagarummaa Federaalummaa fi Mootin Buluu
HomeAfaan OromooGaraagarummaa Federaalummaa fi Mootin Buluu
Damee Boruu: Sadaasa 11, 2020
Biyyaa akka Impaayeera Itoophiyaa sabaa fi sab-lammii danuu qabduuf sirni federaalaa wabii nagaan waliin jiraachuu fi mirgi namummaan lammii keessatti kabajamu taha. Sirni faderaalaa biyyichi akka haphee akka walitti qabee waliin turuuf filmaati tokkicha akka tahe ifaa dha. Sabaa fi sab-lammiin afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaan isaa kabajameef mataa isaa yoo kan of bulchu tahee nagaan qaama biyya tokko tahuun rakkina hin qabu. Warri Mootii leelisu garuu kan barbaadu afaan isaanii, aadaan isaanii,seenaan isaanii, amanitin isaanii kan biyyaa isaan hawwanii tahee akka barbaadanitti bituu fi saamuu akka qaban ifatti labsachaa jiru. Sabaa fi sab-lammiin afaan, aadaa, seenaa fi amantii addaa isaan hin barbaachisu jedhu. Eenyummaan isaa dhokatee akka isaaniif jilbeefate bitamu gochuuf akeeka mul’ataa qabu.
Waan baayyee na ajaa’ibu ilmaan nafxanyaa akaakuu sadiin Masaraa Minilkii keessa qubatanii shira xaxanii Uummata Amhaaraa waraanatti oofanii ficcisiisuu malee akka TPLF dhaqanii uummata keenya kan jedhan wajjin jiraatanii, dammaqisanii, ijaaranii akka lafa isaa deebifatu wajjiin loluu hin fedhan. Finfinnee taa’anii jireenya bashanaa jiraachaa qotee bulaa Amhaaraa itti qawwee hiranii akka dhumu gochuun cubbuu guddaa dha. Nafxanyoonni jaalala aangoo malee jaalala Uummata Amhaaraa hin qaban. Diinni Uummata Amhaaraa inni dhugaan nafxanyoota maqaa isaan daldala siyaasaa oofaa akka Uummatni Amhaaraa nagaa argatee olla isaa wajjin hin jiraanne warra godhu dha. Nafxanyoonni namoota dhalootan Tigray tahan adamsanii Finfinnee keessaa baasaa jiru. Gaadidduun har’a gochaa jiranii boru akka isaan irratti tahuuf deemuu hubachuun gamnummaa dha.
Bara mootummaan EPRDF sirni federaalummaa biyyaa sana keessatti diriire utuu hojiin hiikamee jiraatee rakkinni naannoo kana irratti bara baraan ka’uuf hiikaa isa dhumaa tahu danda’a ture. Rakkinni of tulummaa fi oftummaa TPLF irraa kan ka’e akka sirni faderaala lafa qabatee hojii irra hin oole tahe jira. Seerri federaalaa haa jiraatu malee seeraa ol tahee kan biyyaa saamuu, mootummaa naannoo mataa micciree gara barbaadutti wagga digdamii torbaaf kan naanneessaa ture ijaarsa TPLF akka ture dhokkataa miti.
TPLF iijaarsota EPRDF keessa maqaaf jiranii ol aangoo qabaachuun na hin xuqqinaa, natti hin dubbatinaa jedhee hidhaa, ajjechaa, saammichaa fi gidiraa guddaa uummata irraan gahuu waan iraanfatamu miti. Bara isaan bulchaa turan sana gumrukaa fi qubsuma xiyyaraa keessa malattoon (password) nagaan nama dabrsuu Afaan Tigray dubbachuu dha jedhamaa ture. Har’a kunoo namni Afaan Tigray dubbatuu qubsuma Xiyyaara keessaa qabamee yaroo deebi’ u geenyee jirra. Dubbiin kun hin bariitu seetee isaa jedhan tahaa jira! TPLF waan kaleessa dogongorate hojjeteef baduu qabdi jechuun qajeelaa hin tahu. Isa darbe irraa barachaa biyyaa uummatni nagaan keessa jiraatu ijaaruuf of qopheessuun waan barbaadamu keessa isa duraa tahuu qaba. Haaluu wal bahuuf fiiguun bakka itti dhaabbatu hin qabu. Boru kan koo jennee yoo yaadne wayya.
Utuu akka fedhii Uummata Oromoo tahee, TPLF haa baduu namni jedhu yoo jiraate TPLF dura kan baduu qabu OPDO taha. TPLF dabalatee warri TPLF jala ruuqamee uummataa isaa guruguraa ture hunduu baduu qaba. Kan Uummata Oromoo adda duraan waxalaa, dhidhitaa, hidhaa, ajjeesaa fi saamaa ture OPDO har’a Bilxignaa ofiin jettu kana akka tahe namni hin beekne hin jiru. Waan Bilxigaanaan sobdee uummata gowwomsuuf wacabaraa jirtu hunduu bilaasha. OPDOn badii darbe irraa barate waan xiqqoo of wayyeessite tokko hin qabdu.
Kan caaluu iyyuu aangoon TPLF dhiifteef deemtee ishee macheese akka eenyummaa ishee walaaltu ishee godhee jira. Nama hundaaa caalaa har’a namni TPLF arbsaa, abaruu fi bulguu godhee dubbatuu OPDO dhuma hundi keenya kaleessa beeknu. Akka kaleessa jilbeefatee TPLFf daaktee bukkeessa turte dagatee miti. Akka yaada isheetti uummata kana gowwomsuuf waan gamnoomaa jirtu itti fakkaata. OPDOn onnee hin jirre horatee gaangee takaalaa kutate taatee goodaan na hin gahiin jechaa jirti. Nama waxaluu, dhidhiituu, qaama irraa hir’isuu, hidhuu fi adamsanii ajjeesuu hojii ishee bara TPLF amma daangaa dhabutti guddistee jirti. OPDOn waggaa lamaan biyyaa fudhate kana keessatti hidhaan, ajjeechaa fi saamichi harka dhibaatama hedduun dabalee amma namni bahee galuu dadhabu gahee jira.
Qarree fi Qeerroon Oromoo dhiiga isaanii kumaatam hedduun itti dhangalaasanii OPDO gad aantummaa jalaa baasanii ol aantummaa aangoo itti ol baasuun OPDOf lootorii tahee jira. Carraa lootoriin baheef kanaan warra galateefamuu qabu Qarree fi Qeerroo Ormoo dugugdee lafa irraa balleessuu maaliif akka irratti xiyyeefatte namaaf hin galu. Qabeenya TPLF dhiiftee deemte akka barbaadde saamtee ittiin boololi’aa jirti. Lafa, manaa fi qabeenya hoomshaa TPLF dhiiftee baqate kan dhaalee cabaccabaa jiru OPDO dha. OPDOn akka Taayyee Danda’a Milliyoona lama konkolaataan baatanii nama isaan tumsu akka bitachaa jiran waan saaxila bahee aggarre.
Qabeenya uummataa saamtee horii tuulachuun yaadoo biraa itti tahee jira. OPDOn of dandeesse qofaa dhaabbachuuf dugunguruu dugdaa hin qabdu. TPLF jalaa deemnaan warra nafxanyaa itti hirkachuuf dirqmtee jirti. Nafxanyoonni waan humna Oromoo cabsan itti haa fakkaatu malee isaan garuu morma ishee hudhanii lubbuu ishee keessaa baasuuf suuta akka qeeransaa akka itti qaxisaa jiran hubachuuf sammuu hin qabdu. Warri nafxanyaa Uummata Oromoo duraa warra OPDO Bilxiginaa ofiin jettu akka dhabamsiisan ifa jira. Uummatni Oromoo waan nafxanyaan tahe bareechee waan beekuuf achi fagootti of irratti facisaa jira. Kan tasa baduuf deemu warra garaa ishee malee kaayyoo fi akeeka hin beekne OPDO dha.
Bilxiginaan nafxanyaan utubamtee waraana Uummata Oromoo irratti waggaa lamaa ol oofaa jirtu of irraa ittisee dandamachaa jira. Yaroo amma of iirra ittisuu irra darbee haleelaa gochuu itti fufeera. Uummatni Oromoo diina kam iyyuu qabsoon irra aanee bilisa of baasuu malee filmaata biraa hin qabu. OPDOn har’a lafa Amhaaraa deebisuu waraana nafxanyoonni Mootummaa Naannoo Tigray irratti jalqaban tumsuun ilmaan Oromoo kumaatama hedduu ergittee reenfa lakkawwaa jirti. Waraani Wayaanee ilmaan Oromoo ajjeesaa turee fi waraani nafxanyaa ilmaan Oromoo lafa irraa dugugee balleessuuf deemu jiddutti waraana godhamu keessaa Uummatni Oromoo danta tokko hin qabu. Gama kamiin iyyuu irraa hirmaachuun lola isaa hin ilaalle keessatti dhumuu dha.
Sababni waraana kana seera eegsisuu jedhee akka namichi maraatan Kononeel Abiyi ololaa jiru miti. Seera federaalaa qofa utuu hin taane mootummaa fedraalaa iyyuu jigsee kan jiru isa. Mootummaan naannolee hundaa diige abbaa barbaade muudee abbaa barbaade aangoo irraa buqqisee kan biyya jeeqaa jiru Kononeel Abiyi akka tahe biyyi lafaa ni arga. Yaroo filmaataa dabarsee kan beekamtii tokko malee abba aangoo tahee jiru isa. Qabeenya biyyaa akka barbaadetti mancaasaa waraana uummata nagaa iratti labsee kan fixaa jiru isa. Utuu seera federaalaa eegsisuu tahe silaa biyyatu ka’ee isa irratti duuluu qaba. Waraanni amma Tigray irratti labsame waraana lafa deebifanaa naannoo Amhaaraa Bilxiginaa, Abin fi Ezemaan oofaa jiran waan tahee uummata Kibbaa hin ilaallu. Kanaafuu akka irraa hin hirmaane beekuu qabu. Maqaa lafaan aangootii deebina jedhee warri waraana labsanii gaaga’ama lubbu namaa fi qabeenyaa biyya kana keessatti gahuuf itti gaafatama duraa fudhatan Bilxiginaa, Abinii fi Ezeemaa akka tahe gad fageessine isaan hubachiisu qabna.
Karaa biraa waraanni kun gama nafxanyootaan akka hin milkoofne gochuun baayyee barbaachisaa dha. Waraana kana warri nafxanyoota injifatanii yaroo deebi’an Oromummaa fi Oromiyaa akka dhabamsiisuuf deeman ifatti himachaa jiru. Akkuma kana sirna Mootii hawwaa jiran deebisuuf uummata Kibbaa hunda irratti iyyuu akka duulan gaaffii hin qabu. Uummatni Oromoo dhadanaa fi doorsisa isaanii kana utuu dhaga’uu taa’ee eegachuu hin qabu. Kanaafuu waan hatattamaan godhamuu qabu irra deddeebinee wal yaadachiisuuf:
Ilmaan Oromoo hidhatanii jiran: milishaan, Poolisiin, humni adda fi RIB waraana kana keessa akka qooda hin fudhanne dhiibaa gochuu.
Bifa kamiin iyyuu warri hidhatee jiruu lola isaan hin iaallee keessa seenanii irbaata rasaasaa tahuu irra meeshaa isaanii wajjin gara qabsoo saba sanii akka goran hawwachuu.
Hatattamaan Mootummaa Cehumsaa ijaarannee biyyaa jeequmsaa sirna dhablummaa irraa olshuu.
Kaabinee fi kaadiree Bilxiginaa uummata burjaajessa fi hunkuraa jirtu Oromiyaa keessaa haxa’anii baasu.
Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran karaa qinda’ee fi amansiisaa taheen mana hidhaa keessaa baasu. Warra tuhannoo guddaa jala baasuuf eeganaan godhamuu qaba.
Waan hundaa caalaa wabii fi gaachana Uummata Oromoo WBO jajjabeessuu.
Uummatoota cunqursamoo Kibbaa wajjin wal quunnamtii karoora qabsoo qinda’een humna nafxanyaa of irraa itisuu qophaa’uu.
Oromonni diaspora fi biyya keessa jiran WBO fi QBO horii, meeshaa fi yaadan utubuu.
Hojiin diploomaasii fi hiriirri biyya alaa keessatti jalqabee ture itti fufee fininuu.
Gadaan Gadaa Xumraa Garbumaa Ti!
From Nobel Peace Prize to War Crime – Case of Abiy Ahmed
Galmi Waraana Kononeel Abiyi Morma Isaa Funyoof Kennuu Dha